Injeniera - Pejy 2 - Geofumadas
Bentley, Leica ary PlexEarth dia anisan'ny vaovao mahaliana indrindra manomboka amin'ny febroary 2019. Ho fanampin'izany, asehonay fa nanangona hetsika mahaliana 21 ho avy izahay, izay ahafahan'ny vondrom-piarahamonin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny geoengineering mandray anjara. Ny sasany amin'ireo lohahevitra noresahina tamin'ireo hetsika ireo dia: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
Ny fahaiza-manaon'ilay mpandraharaha sivily dia tsy maintsy maka amin'ny tompon'ny fananganana
Rehefa nandinika ny fomba hiatrehana ny fivoaran'ity lohahevitra ity dia tonga tao an-tsaiko avy hatrany ny herinandro voalohany naha injeniera sivily ahy; Taorian'ny nahazoako diplaoma dia nanapa-kevitra ny handeha hitsidika ny raibe sy renibeko aho miaraka amin'ny hevitra hankafy andro milamina vitsivitsy. Ny marina dia tao anatin'ny iray andro dia nahazo lesona aho taorian'ny ...
Fitantanana ny tetik'asa: eo amin'ireo fanamby izay tsy hianatra amin'ny injeniera sivily ao an-dakilasy
Rehefa nahavita ny mari-pahaizana ary nahazo diplaoma ho injeniera, ny fanatanterahana ny iray amin'ireo tanjona apetraky ny mpianatra tsirairay rehefa manomboka ny fianarany amin'ny oniversite dia miharo. Mbola zava-dehibe kokoa aza raha ny asa fiafarana dia any amin'ilay faritra tianao. Ny injeniera sivily dia asa mandrisika olona an'arivony ...
Bentley Systems dia manitatra ny tetikasa fanorenana sy torolàlana momba ny asa vita amin'ny alàlan'ny famoahana ny S-Cube Futuretech
New Advanced Capilities for Structural Concrete Analysis, Design and Documentation Solutions Bentley Systems, Incorporated androany dia nanambara ny fahazoana ny rindrambaiko fananganana sy fananganana beton monina ao Mumbai avy amin'ny S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Ny fanampiana ny Ny S-Cube Applications Futuretech dia manitatra tolotra manokana an'i Bentley miaraka amin'ny…
Allplan: 4 2017 nampanantena fiandohana vaovao
Allplan dia manolotra ny vahaolana BIM Allplan 2017-1: Fotoana bebe kokoa ilaina - Fanatsarana marobe mba hanamorana ny fitantanana asa sy ny maodely 3D. - Fifanakalozana angona voatsara amin'ny alàlan'ny IFC4. - Fisafidianana malalaka ny rafitra fampifandraisana visy Allplan dia manolotra fanatsarana vaovao sy fandrosoana ao amin'ny vahaolana BIM Allplan 2017 ho an'ny mpanao mari-trano sy…
Ny fandosiran'i Chapo Guzmán, asan'ny injeniera avo
Isika izay nitarika asa fandinihana ho an'ny tunnel dia mahafantatra ny fahasarotan'ity fitsipi-pifehezana ity, ny fahafatesan'ny olona izay maneho ny tsy fahatomombanan'ny faharoa amin'ny 1,500 metatra ary ny fepetra fiarovana rehetra tokony horaisina. Eo anelanelan'ny tranomaizina El Altiplano sy ny trano misy ny trano ...
Injeniera momba ny teknolojia an-dàlambe any Espana ary injeniera sivily any Sina ao anatin'ny 4 taona monja
Ny University of Burgos dia manana fiaraha-miasa mahaliana amin'ny Oniversiten'i Chongqing Jiaotong any Sina, izay anolorana ny mari-pahaizana momba ny teknolojia an-dalambe sy ny mari-pahaizana momba ny teknika sivily any Sina, izay nieritreritra ny vinavina iraisam-pirenena ankehitriny sy ho avy ny asa. Ny diplaoma amin'ny injenieran'ny ...
Fampianarana CAD / GIS, Engineering, maro
Finalists for ho Ara-tsindrimandry 2014
Amin'ny 6 Novambra, ny loka Be Inspired Awards isan-taona dia hatao any London. Ity daty ity dia hifanandrify amin'ny kaonferansa momba ny teknolojia ampiharina amin'ny fitantanana fotodrafitrasa manan-tsaina, izay ny talata, alarobia ary alakamisy. Eto isika, izay manatrika ny Fihaonambe dia afaka mandray anjara amin'ny dinika mahaliana 6, ao amin'ny Vision of the Future, ...
Previous page pejy 1 pejy 2 pejy 3 pejy 4 pejy 5 Next pejy